Tuesday June 15, 2021 - 13:13:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
(Rating 2.9/5 Stars) Total Votes: 19
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta ka dhacay saldhig melleteri oo kuyaal magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Jugta qaraxa ayaa maanta barqadii laga maqlay saldhig ay ciidamada dowladda Federaalka ku leeyihiin degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalyahan naftiis hure ah uu beegsaday goob ay ku kulansanaayeen ciidamo katirsan dowladda Federaalka kuwaas oo loo diyaarinayay tababar melleteri oo uu bixiyo melleterig Turkiga.
War rasmi ah oo kasoo baxay Al Shabaab ayay ku sheegteen mas'uuliyadda weerarkii maanta, taliska ciidanka XSHM wuxuu sheegay in ugu yaraan 40 askari lagu dilay weerarka.
"Camaliyad Istish-haadiyo ah oo uu fuliyay geesi ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta ayaa maanta waxay ka dhacday gudaha Xerada Turkiga ee Turkisom ee magaalada Muqdisho, waxaana xiliga camaliyada ay dhaceysay halkaasi ku sugnaa maleeshiyaad askar ahaan loo qorayay oo ka tirsan Ururka sagaalaad ee Gorgor ee Ridada , dhimashada Camaliyada waa 40 askari, dhaawacana waa 50 Askari" ayaa lagu yiri war ay baahisay Idaacadda Andalus.
Dowladda Federaalka oo ka hadashay qaraxii Warshadda Nacnaca.
Dhinaca kale dowladda Federaalka ayaa xaqiijisay in qarax khasaara xooggan dhaliyay lagu beegsaday xerada Nacnaca ee loo bixiyay Jeneraal dhegabadan halkaas oo lagu diyaarinayay ciidamo uu Turkigu tababari lahaa.
Jeneraal Odawaa oo ah taliyaha ciidanka melleteriga ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahan soo xirtay suun walxaha qarxa lagasoo buuxiyay uu beegsaday ciidamo saf kujiray.
Taliska ciidanka ayaa khasaaraha dhimasho ee ka dhashay qaraxii maanta kusoo koobay 10 askari iyo dhaawaca tobanaan kale, Odawaa ayaa weerarkii warshadda Nacnaca ku tilmaamay wax laga xumaado isagoo taczi udiray ehellada askartii ladilay.
Weerarkii maanta ayaa ka dhacay goob ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo waxaana muuqata in Al Shabaab ay si heer sare ah usoo qorsheeyeen weerarkan lagu beegsaday maleeshiyaadka dowladda gaar ahaan kuwa loo yaqaan Gorgor.
Qaraxii maanta ayaa imaanaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyay waxaana lagusoo daadiyay waddooyinka kumanaan askari.
9 askari oo ku dhintay qarax iyo iska hor'imaad ka dhacay deegaan katirsan Hiiraan.
Shacabka qowmiyadda Amxaarada oo lagu armay in ay hubka uqaataan ladagaallanka Tigreega.
Faah Faahin: Wasiir Fiqi iyo Jeneraal Biixi oo isku day dil ka badbaaday.